FOMBA 8 HAMAHANA NY OLANA DOWNLOAD MMS - MALEFAKA
Fomba 8 hamahana ny Olana Download MMS
MMS dia mijoro ho an'ny Multimedia Messaging Service ary fitaovana iray hizarana sary, horonan-tsary, raki-peo, amin'ny alàlan'ny serivisy fandefasana hafatra ao anaty fitaovana Android. Na dia niova aza ny ankamaroan'ny mpampiasa tamin'ny fampiasana fampiharana Fandefasana hafatra toa ny WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, sns., dia mbola betsaka ny olona tia mampiasa MMS ary tsara izany. Ny hany olana mahakivy izay nitarainan'ny mpampiasa Android matetika dia ny tsy fahafahana misintona MMS amin'ny fitaovany. Isaky ny manindry ny bokotra fampidinana izy ireo, dia aseho ny hafatra diso tsy afaka misintona na Media tsy misy rakitra. Raha sendra olana toy izany koa ianao amin'ny fampidinana na fandefasana MMS, dia ho anao ity lahatsoratra ity.
Betsaka ny antony mahatonga an'io hadisoana io. Mety ho noho ny fifandraisana Internet miadana na ny tsy fahampian'ny toerana fitahirizana. Na izany aza, raha tsy voavaha irery io olana io dia mila mamaha azy ireo ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity, isika dia handrakotra vitsivitsy vahaolana tsotra izay azonao andramana mba hamahana ny MMS download olana.
Fomba 1: Avereno indray ny findainao
Fomba 2: Jereo ny fifandraisana Internet anao
Fomba 3: Alefaso ny Auto-Download MMS
Fomba 4: Fafao ny hafatra taloha
Fomba 5: Fadio ny Cache sy Data
Fomba 6: Esory ny Apps miteraka olana
Fomba 7: Mivadika amin'ny fampiharana hafa
Fomba 8: Manaova Reset Factory
Na inona na inona olana, ny famerenana tsotra dia mety hanampy foana. Izany no zavatra tsotra indrindra azonao atao. Mety ho toa ankapobe sy manjavozavo izany fa tena miasa. Tahaka ny ankamaroan'ny fitaovana elektrônika, ny findainao koa dia mamaha olana maro rehefa vonoina sy averina indray. Ny famerenana indray ny findainao dia hamela ny rafitra Android hamaha izay mety ho tompon'andraikitra amin'ny olana. Tazony fotsiny ny bokotra herinaratra mandra-pipoitra ny menio herinaratra ary tsindrio ny Restart/Reboot safidy . Raha vao manomboka indray ny telefaona dia jereo raha mbola mitohy ny olana.
Ny hafatra multimedia dia mila fifandraisana Internet marin-toerana vao azo alaina. Raha tsy misy fifandraisana Internet misy amin'ny fitaovanao, dia tsy afaka misintona azy fotsiny ianao. Tariho midina avy ao amin'ny tontonana fampahafantarana ary ho azo antoka fa ny anao Velona ny Wi-Fi na angona finday . Mba hijerena ny fifandraisana dia andramo manokatra ny navigateur ary tsidiho ny tranonkala sasany na angamba milalao video amin'ny YouTube. Raha tsy afaka misintona MMS amin'ny Wi-Fi ianao dia andramo mifindra amin'ny angona findainao. Izany dia satria maro ny mpitatitra tambajotra aza avela hisintona MMS amin'ny Wi-Fi.
Jereo koa : Fix WiFi Authentication Error
Ny famahana haingana hafa amin'ity olana ity dia ny fampandehanana auto-download ho an'ny MMS. Ny fampiharana fandefasana hafatra default amin'ny findainao Android dia ahafahanao mandefa hafatra SMS sy multimedia. Azonao atao koa ny mamela ity fampiharana ity misintona ho azy ny MMS amin’ny fotoana handraisanao azy. Araho ireto dingana ireto mba hianarana ny fomba:
1. Sokafy ny fampiharana fandefasana hafatra default amin'ny fitaovanao.
2. Tsindrio ny bokotra menu (teboka telo mitsangana) eo amin'ny ilany havanana ambony amin'ny efijery.
3. Tsindrio ny Fikirana safidy.
4. Eto, tsindrio ny Advanced safidy.
5. Tsotra izao Ampifandraiso amin'ny switch eo akaikin'ny Auto-download MMS safidy.
6. Azonao atao koa avelao ny safidy hisintona MMS mandeha ho azy rehefa safidy roaming raha tsy any amin'ny firenenao ianao.
Indraindray dia tsy azo alaina ny hafatra vaovao raha be loatra ny hafatra taloha. Ny app messenger default dia manana fetra ary rehefa tratra izany dia tsy misy hafatra azo alaina intsony. Amin'ity toe-javatra ity dia mila mamafa hafatra taloha ianao mba hanafaka toerana. Rehefa lasa ny hafatra taloha, hafatra vaovao dia ho tonga dia alaina ary dia toy izany amboary ny olan'ny fampidinana MMS . Ankehitriny, ny safidy hamafa hafatra dia miankina amin'ny fitaovana mihitsy. Raha ny fitaovana sasany dia mamela anao hamafa ny hafatra rehetra amin'ny tsindry tokana avy amin'ny Settings tsy ataon'ny hafa. Mety tsy maintsy misafidy tsirairay ny hafatra tsirairay ianao ary mamafa azy ireo avy eo. Mety ho toy ny dingana mandany fotoana izany saingy matokia ahy fa mandaitra izany.
Fomba 5: Hamafa Cache sy Data
Ny fampiharana tsirairay dia mitahiry angona sasantsasany amin'ny endrika rakitra cache. Raha tsy afaka misintona MMS ianao, dia mety ho noho ny fisie cache sisa no simba. Mba hamahana ity olana ity dia azonao atao foana manandrama manadio ny cache sy ny angona ho an'ny fampiharana . Araho ireto dingana ireto mba hanesorana ny cache sy ny rakitra angona ho an'ny fampiharana Messenger.
1. Mandehana any amin'ny Fikirana amin'ny findainao dia tsindrio ny app safidy.
2. Ankehitriny, fidio ny Messenger app avy amin'ny lisitry ny fampiharana. Manaraka, tsindrio ny fitahirizana safidy.
3. Ho hitanao izao ny safidy ho mazava angon-drakitra ary madio ny cache . Tsindrio ny bokotra tsirairay dia ho voafafa ireo rakitra voalaza ireo.
4. Ankehitriny, mialà amin'ny toe-javatra ary andramo misintona MMS indray ary jereo raha afaka manao izany ianao manamboatra MMS Download Olana.
Mety ho avy amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo no mahatonga ny fahadisoana. Matetika dia manelingelina ny fampandehanana ara-dalàna ny fitaovanao ny rindranasa famonoana asa, ny fampiharana madio kokoa ary ny anti-virus. Mety ho tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fampidinana MMS izy ireo. Ny zavatra tsara indrindra atao amin'ity toe-javatra ity dia ny manala ireo fampiharana ireo raha manana ianao. Atombohy amin'ny fampiharana famonoana asa. Raha mamaha ny olana izany dia tsara ny mandeha.
Raha tsy izany, tohizo ny fanesorana izay fampiharana madio kokoa izay misy amin'ny findainao. Raha mbola mitohy ny olana dia ny andalana manaraka dia ny rindrambaiko antivirus . Na izany aza, tsy azo antoka ny manala tanteraka ny anti-virus ka izay azonao atao dia ny manaisotra azy amin'izao fotoana izao ary jereo raha mamaha ilay olana. Raha tsy misy amin'ireo fomba ireo no miasa, dia mety ho any amin'ny fampiharana hafa an'ny ankolafy fahatelo no alainao vao haingana ny olana.
Ny fomba tsara indrindra hahazoana antoka an'izany dia ny fandefasana ny fitaovanao amin'ny fomba azo antoka. In Safe mode , ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo rehetra dia kilemaina, ka tsy misy afa-tsy ny fampiharana rafitra efa napetraka mialoha. Raha afaka misintona MMS am-pahombiazana amin'ny fomba azo antoka ianao, dia voamarina fa fampiharana an'ny antoko fahatelo ilay meloka. Noho izany, ny Safe Mode dia fomba mahomby hamantarana izay mahatonga ny olana amin'ny fitaovanao. Ny dingana ankapobeny hamerenana amin'ny fomba azo antoka dia toy izao manaraka izao:
1. Voalohany, tsindrio ary mihazona ny bokotra Hery mandra-pipoitra ny menio Hery eo amin'ny efijery.
2. Ankehitriny, tap ary mihazona ny Power off safidy mandra-Reboot to safe mode safidy mipoitra eo amin'ny efijery.
3. Rehefa afaka izany, tsindrio fotsiny ny bokotra Ok ary ny fitaovana dia hanomboka rebooting.
4. Rehefa manomboka ny fitaovana, dia handeha amin'ny Safe mode, izany hoe ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia ho kilemaina. Azonao atao ihany koa ny mahita ny teny hoe Safe Mode voasoratra eo an-jorony mba hilazana fa mandeha amin'ny Safe mode ilay fitaovana.
Jereo koa : Ahoana ny fomba hamonoana ny Safe Mode amin'ny Android
Fomba 7: Mivadika amin'ny App Hafa
Raha tokony hifikitra amin'ny teknolojia taloha ianao dia afaka mandroso amin'ny safidy tsara kokoa. Misy be dia be ny hafatra malaza sy ny chat fampiharana izay mamela anao handefa sary, horonan-tsary, raki-peo, fifandraisana, toerana, ary antontan-taratasy hafa mampiasa ny Internet. Tsy toy ny serivisy fandefasana hafatra mahazatra izay manefa vola fanampiny ho an'ny MMS, maimaimpoana tanteraka ireo fampiharana ireo. Fampiharana toy ny WhatsApp, Facebook Messenger, Hike, Telegram, Snapchat dia ny sasany amin'ireo fampiharana fandefasana hafatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao ankehitriny. Azonao atao koa ny manao antso an-peo sy antso an-tsary maimaim-poana amin'ny fampiasana ireo fampiharana ireo. Ny hany ilainao dia fifandraisana Internet stable ary izay ihany. Ireo fampiharana ireo dia manana endri-javatra fanampiny mahafinaritra be dia be ary miantoka ny traikefan'ny mpampiasa tsara kokoa noho ny fampiharana fandefasana hafatra. Tena manoro hevitra anao izahay eritrereto ny hifindra amin'ny iray amin'ireto fampiharana ireto ary azonay antoka fa rehefa manao izany ianao dia tsy hiherika intsony.
Fomba 8: Manaova Factory Reset
Raha tsy misy zavatra hafa miasa ary ianao ary tena te hampiasa ny fampiharana hafatrao mba hisintonana MMS, ny hany sisa tavela dia ny Factory Reset. Izany dia hamafa ny angon-drakitra, fampiharana ary fanovana rehetra amin'ny findainao. Ny fitaovanao dia hiverina amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny tamin'ny namoahanao azy voalohany. Tsy ilaina ny milaza fa ho voavaha ho azy ny olana rehetra. Raha misafidy famerenan'ny orinasa ianao dia hamafa ny fampiharanao rehetra, ny angon-dry zareo, ary koa ny angona hafa toy ny sary, horonan-tsary, ary mozika amin'ny findainao. Noho izany antony izany dia tsara ny mamorona backup alohan'ny handehananao amin'ny famerenan'ny orinasa. Ny ankamaroan'ny telefaona dia manery anao hamerina ny angonao rehefa manandrana manao izany ianao orinasa reset ny findainao . Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana namboarina ho an'ny backup na manao izany amin'ny tananao, anao ny safidy.
1. Mandehana any Fikirana ny findainao.
2. Tsindrio ny RAFITRA tabilao.
3. Ankehitriny raha mbola tsy nanohana ny angona ianao, tsindrio ny Backup ny angonao safidy hitahiry ny angonao ao amin'ny Google Drive.
4. Aorian'izay dia tsindrio ny Mamerina tabilao.
5. Tsindrio izao ny Reset Phone safidy.
Ahoana ny fidirana amin'ny Menu Settings Android
Ahoana ny fomba hahazoana lalao amin'ny Android
Araka ny voalaza tetsy aloha, indraindray ny olana amin'ny MMS dia avy amin'ny orinasa mpitatitra. Ohatra, ny orinasa sasany dia tsy mamela anao handefa rakitra mihoatra ny 1MB ary tsy hamela anao hisintona rakitra mihoatra ny 1MB. Raha mbola miatrika ity olana ity ianao na dia efa nanandrana ireo fomba voalaza etsy ambony aza, dia mila miresaka amin'ny mpanome tolotra na mpitatitra anao ianao. Azonao atao mihitsy aza ny mieritreritra ny hifindra amin'ny serivisy mpitatitra samihafa.